Farriin Jaceyl : Qaado Ilinteyda Gadaalna Ha Isoo Fiirin Haddii Aad Isu Haysato In Aad Guuleysatay - Arimaha Bulshada
Farriin Jaceyl : Qaado Ilinteyda Gadaalna Ha Isoo Fiirin Haddii Aad Isu Haysato In Aad Guuleysatay
Qaado illinteyda iyo dhamaan xanuunkeyga gadaalna ha usoo fiirin dhibka aad ii geysatay,ii daa in xanuunka kelinimada aan ku noolaado,hana soo fiirinin gadaashaada,hadey ku tahay inaad guuleysatay qaado oo xambaarso baroorteyda,illeyn waad u qalantaa inaad qalbiyada la dhaawacay ku faantee! Ii ogolaaw inaan noolaado.
Uma qalantid jaceylkeyga xittaa xumaanteyda, Kelinimada ka dhigo wehel,naxariis daradana ha kuu ahaato aasaaska noloshaada, Ku qanacsanaanta qiyaanada ha ahaato farxada noloshaada. Qaado kuli marka laga reebo qalbigeyga.
Waa I dhaawacday in ka badan dareenkii iyo jaceylkii aan kaa mudnaa. Ma waxaa ugu wacan arintaas jaceylka badan kan aad istaahishay ee aan kuugu deeqay?
Waxa ay u baahan tahay adeyg in la jeclaado qof,waxaase ka sii daran in qalbigaas la dhaawacay uu mar kale wax sii jeclaado,waan xusuusnaan doonaa weligey keliya ma ahan in aad I niyad jebisay,laakin waa in aad tahay qofka ii sheegay sida loogu noolaado qalbi la jabiyey, Maxaa ku helay? Waxaan kaa bartay dhaqanka.
Niyadaada kuma soo dhacin miyaa in aad aqbaarteyda hesho,maxaa iska kaa bedelay.
Ha igu eedeyn dambiyo aad adiga nafteyda ka gashay, maxaad daneyste tahay?
Ha igu eedeyn aniga qaladaad aad adiga sameysay, Waxaan marwalbo ka baqayay in aan dhaawaco dareenkaaga,laakin ii ogolaaw inaan noolaado. Macaane waxaan dhashay maalintii adiga aan kula kulmay,waxaana dhintay maalintaad iga tagtay.